Allgedo.com » Madaxweynaha oo SONNA ugu hambalyeeyey sannad guurada 53-aad
Madaxweynaha oo SONNA ugu hambalyeeyey sannad guurada 53-aad
Print here| By: allgedo.com: Friday, January 6, 2017 // u Jawaab
Mudisho 06 Janaayo 2017- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeey bahda Wasaaradda Warfaafinta gaar ahaan Shaqaalaha iyo Maamulka Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed (SONNA) Munaasabadda 53-aad ee ka soo wareegatay aas-aaskii SONNA oo maanta ku beegan.
“Maanta waa maalinweyn oo ku began maalintii la aas aasay wakaaladda Wararka Soomaaliyeed (SONNA) ,Waxaaan hambalyo iyo Bogaadin u dirayaa dhammaan Umadda Soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha iyo Maamulka SONNA” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabadaan horumarka ah ee ay sameysay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA ay qeyb ka tahay dedaalada lagu soo nooleeyey laguna horumarinayo hey’adaha dowladda. Madaxwaynaha ayaa ku dhiirigaliyay masuuliyinta Wakaaladda in ay laba-laabaan dadaalkooda isla markaana sii kordhiyaan hiigsigooda ah horumarinta Wakaaladda SONNA, islamarkaana ku tilmaamay in ay ka mid tahay Hay’adaha u taagan kor uqaadista iyo soo bandhiggidda Xaqiiqada rasmiga ah ee Soomaaliya.
Ugu dambayn, Madaxwaynuhu wuxuu si gaar ah ugu ammaanay Wasaaradda, gaar ahaan Madaxda Wakaaladda, hawlkarnimada ay ku xaqiijiyeen soo noolaynta SONNA, taas oo ah guul u soo hoyatay Qaranka Soomaaliyeed.